Karatra amin'ny fiteny ho an'ny fiteny vahiny
Ny karatra amin'ny fiteny fianarana fiteny vahiny dia fomba tsotra sy mahazatra indrindra amin'ny fandalinana ny tena. Ny lafiny iray dia misy teny sarotra, ary ny lafiny iray dia manana dikany na fandikan-teny.
Rehefa avy nanao ny sarin'ny karatra ianao dia manomboka mijery ny karatra, mametraka tsikelikely ny zavatra efa nianaranao, mandra-pahaizanao ny deck rehetra.
Rehefa avy nitadidy teny vaovao 10.000 aho ary nampiasa azy ireo amin'ny fomban-drazana, dia afaka manoratra tantara momba ny dingam-poko aho, izay antenaiko dia afaka manampy anao handalo io làlana io miaraka amin'ny fahombiazany, amin'ny fotoana fohy ary amin'ny fahadisoana vitsy kokoa.
Voalohany, miezaka ny mianatra ny teny 500 ampiasaina amin'ny teny Anglisy aho ary nahita ny antontan'isan'ny teny ampiasaina indrindra, voaara-miorina amin'ny fikarohana.
Rehefa namorona lisitr'ireo teny ireo aho, dia nanomboka namorona karatry ny baoritra aho, mba hizara azy ireo ho any am-bolana ary hianatra azy ireo.
Rehefa tontosa ny tanjona dia nahatsapa aho fa tokony ho fantatra 5000 hafa fara-fahakeliny ny tenimiafina amin'ny teny Anglisy.
Ny tsy fahafahako mampiasa karatra papila an'arivony dia nanosika ahy hampivelatra fampiharana finday mahazatra ho an'ity tanjona ity.
Ilaina ny mamaritra ny asa fototra mba hahatratrarana ny vokatra faran'izay ambony. Noho izany, talohan'ny nanombohana ny fampandrosoana ny fangatahana, nanangona lisitra feno sy ny fitaovana ilaina aho:
Ny fahafahana mamorona sy mitahiry karatra tsy voafetra
Arsiva amin'ny fametrahana sy fandinihana ny habetsahan'ny fitaovana enti-mody
Fahafahana maka ny antontan'isa avy amin'ny antontan-taratasy mifototra amin'ny asam-panamboarana karatra mba hamoronana ny fitaovam-pampianaranao manokana
Fanairana an-tsehatra amin'ny karatra rehetra ao amin'ny baiko tadiavina, miaraka amin'ny fihenan-tsainy indray ary ny fampiasana ny mpilalao audio mba hihaino ny fitaovana nampianarina amin'ny fotoana rehetra
Fananganana tahadikan-kevitra an-tsoratra amin'ny lafiny samihafa eo amin'ny fiainana
Mamorona flashcards amin'ny sary miaraka amin'ny sary mba hamoronana fikambanana amin'ny sary
Operation tsy misy aterineto na amin'ny fomba fiaramanidina
Fikojakojana ny rahona ho an'ny teny maharary rehetra
Fomba fanaovan-tsakafo isan'andro ho an'ny tsiaro teny
Fampandrenesana ny fampiharana voalamina
Fanamafisana ny fomba famaritana ny teny
Fandefasana karatra amin'ny tahiry
Ny fahafahana hianatra fiteny vahiny sy fiteny maro samihafa
Rehefa namaritra ny tanjona dia nanomboka namorona vokatra vaovao aho.
Tsy dia manana traikefa momba ny fampivoarana ny programa Android amin'ny fandefasana Android aho, dia nanomboka niasa tamin'ny dikan-teny voalohany amin'ny LingoCard aho noho ny smartphone-nao ary nandritra ny volana maromaro dia ny fangatahana fampiasa finday voalohany amin'ny karatra amin'ny teny sy ny antontan-kevitra iray (karazana karaokety iray) dia vonona. Mba hampivoarana fitaovana sarotra kokoa, dia nanomboka nifanakalo hevitra momba ny fanatanterahana ireo mpandraharaha matihanina fantatro aho. Tian'ilay tovolahy ny hevitrao, ary vokatr'izany dia nanomboka nirotsaka tamin'ny tetikasa ireo mpankafy. Taorian 'ny fanatanterahana ny hevitsika, dia nanapa-kevitra izahay fa tsy hanakana sy hanamboatra fitaovana miavaka hafa ho an'ny rafitra fiasa roa: Android sy iOS. Nampiantrano ny rindrambaiko izahay ao amin'ny Google Play sy ny Apple Store malalaka.
Nandritra ny volana maromaro, olona an'arivony manerana izao tontolo izao no nanomboka nampiasa ny fampiharana tsy misy saram-pindram-bola, nahazo taratasy fisaorana an-tsoratra maro izahay, sora-baventy-taratasy sy soso-kevitra momba ny fomba hanatsarana ny vokatra izay ho antsika velom-pankasitrahana. Vokatr'izany, manana asa maro sy hevitra vaovao isika.
Rehefa miditra amin'ny tontolo iainana eo amin'ny fiteny ianao, dia tonga ny fahatakarana ny filàna ny fahafahana mamoaka fehezanteny haingana. Ny fahatakarana ny fehezanteny sy fehezanteny fototra mahatonga ny fiteninao ho azo ekena amin'ny resaka sy fandikana haingana. Noho izany dia nanapa-kevitra ny hanangona karatra amin'ny sazy, fehezanteny ary idioma. Amin'izao fotoana izao, amin'ny fampiharana ataonareo dia afaka mahita karatra amin'ny an-jatony an'arivony miaraka amina teny sy fehezanteny samihafa.
Ny karatra amin'ny teny rehetra ao amin'ny fampiharanay dia tsy manana fetran'ny fandefasana lahatsoratra, noho izany dia azo atao ny mamorona flashcards amin'ny tononkira tianao indrindra na fehintsoratra ao amin'ny boky tianao indrindra. Rehefa avy nampiditra lahatsoratra marobe ianao dia afaka mihetsika na mihodina ary mihaino amin'ny mpandika teny.
Ny Flashcards dia azo ampiofanana amin'ny fomba roa:
Ny lisitry ny karatry ny karatra, izay ahafahanao mahita ny karatra rehetra atsy ho atsy ary miborosy ny tahiry. Ny karatra tsirairay dia azo alefa mivantana avy ao amin'ny lisitra amin'ny alalan'ny fanindriana ny bokotra.
Mamorona karatra môdely. Eto dia azonao atao ny manokatra ny karatra amin'ny fijery feno miaraka amin'ny votoatin'ny lahatsoratra lehibe ary mametaka ny karajia eo ankavia / ankavanana. Amin'io fomba io dia azo atao ihany koa ny manitsy karatra, mandefa azy ireo any amin'ny antontan-kevitra mavitrika. Azonao atao ihany koa ny mampiditra sary sy sary eo amin'ny flashcard mba hamoronana sary "sary maso". Ny karatra tsirairay dia mihodikodina mankany amin'ny lafiny hafa amin'ny alalan'ny fanindriana fotsiny eny amin'ny sehatra an-tsoratra.
Ao amin'ny menaton'ny fampiharana, dia afaka mahita fomba maromaro momba ny fomba fampiofanana samihafa ianao.
Miasa amin'ny olana momba ny tsy fahampian'ny fotoana hianarana, dia nanapa-kevitra izahay fa hamorona mpilalao feo tokana izay handrenesana lahatsoratra sy karatra noforonina amin'ny alàlan'ny baiko, miovaova amin'ny teny vahiny sy ny dikantenin'izy ireo. Vokatr'izany, ny fiteny vahiny dia azo ampiharina amin'ny fihainoana mozika na aiza na aiza. Ankehitriny ity fitaovana ity dia ampiharina amin'ny fahafahana hihaino 40-50 amin'ny fiteny vahiny, miankina amin'ny fitaovana sy ny sehatra ampiasaina. Mino aho fa rehefa afaka kelikely, ny mpilalao dia hiasa amin'ny fiteny malaza rehetra eto an-tany.
Mety ho zava-dehibe koa ny mitadidy teny, ohatra, amin'ny alàlan'ny alfabeta, amin'ny alàlan'ny alatsinainy, alalana, amin'ny lohahevitra, sns.
Afaka mandalina fiteny miisa 67 miaraka amin'ny fitaovanay ianao. Ny tahirin-tsarinao rehetra dia voarakitra ao amin'ny server cloud, noho izany dia afaka manova fitaovana ianao, mila mahatsiaro ny mailaka sy ny tenimiafinao.
Amin'ny hoavy, manomana fitaovana hikaroka ireo mpandaha-teny an-dàlambe sy ny seha-pifaneraserana amin'ny lahatsary izahay, izay ahafahanao mamorona karatra vaovao amin'ny alàlan'ny resadresaka na lesona.
Ankoatr'izay, miaraka amin'ny fanampian'ny pejin-tsoratra dia azonao atao ny manonona teny marina na fehezanteny marina. Mba hanaovana izany, dia mametraka sy manamboatra fitaovana amin'ny fankatoavana ny teny izay hihaino ny fanononana anao ary hampiseho ny fahadisoanao.
Fampiasana ny rafitry ny Leitner.
Ny rafitra "Leitner" dia fomba iray ampiasaina amin'ny fomba mahomby amin'ny fampiasana ny flashcards izay natolotr'i Sebastian Leitner, mpanao gazety siantifika alemana tamin'ny taona 1970.
Fampihetseham-po tsotra izao ny foto-kevitry ny famerimberenana mitsitsy, izay hijerena ireo karatra amin'ny dipoavatra mitombo.
Amin'io fomba io, ny karatra torolàlana dia sokajina ho vondrona araka ny mahafantatra tsara ny mpianatra tsirairay ao amin'ny boaty fianarana an'i Leitner. Ny mpianatra dia miezaka mitadidy ny vahaolana voasoratra eo amin'ny flashcard. Raha mahomby izy ireo dia mandefa ilay karatra amin'ny vondrona manaraka. Raha tsy mahomby izy ireo dia alefany any amin'ny tarika voalohany. Ny vondrona tsirairay manana fahombiazana dia manana fe-potoana lava be alohan'ny hijanonan'ny mpianatra hiverina hijery ny karatra. Io fomba io dia azo ampiasaina amin'ny fianarana ny teny amin'ny fiteny vahiny, ary amin'ny fitadidiana tsianjery hafa.
Afaka mampiasa ny rafitry ny Leitner amin'ny fampiharana. Afaka mifindra amin'ny tarika maromaro ny flashcards. Ohatra, ianao dia mampiditra ny fitaovana fampiofanana ho fampiharana na misafidiana rakibolana efa vita efa vonona, ary rehefa mandalo amin'ny karatra ianao, dia azonao atao ny mamindra azy ireo any amin'ny "database", avelao eo amin'ny tabilao raha tsy afaka avy hatrany Tadidio izy ireo, na mamindra ireo teny faran'izay sarotra indrindra amin'ny rakitra mavitrika. Avy eo dia hianatra mialoha ny tahiry azo atao ianao, ary avy eo dia misafidy ary isaky ny mandeha, dia avereno dinihina ireo fitaovana azo ampiasaina ao amin'ny fandinihina daty.
Ny atidohantsika dia tsy mahatakatra ny antony tokony hahatsiarovantsika ireo teny vaovao marobe ary miezaka ny tsy hamoaka vaovao tsy ilaina. Mba handresena io olana io dia mila manery ara-bakiteny ny atidoha isika mba hanao izany. Alao sary an-tsaina hoe tokony hahatsiaro teny vaovao an'arivony ianao, mila mamorona angon-drakitra vaovao an-jatony ianao na an-tapitrisa! Vokatr'izany dia azo antoka fa lasa mpitsikilo kokoa isika.
Mba hahatratrarana ireo tanjona ireo, dia mampitombo ny rindrambaiko tsy manam-paharoa izahay, izay azo oharina amin'ny fanenoman-tsaina amin'ny famoronana fifandraisana vaovao eo amin'ny ati-doha - tsy maintsy misafidy ny fitaovana mety ianao ary miezaka ny hahatratra ny vokatra tsara indrindra.